ပိုပြီးသဘာဝအအချိန်များတွင်နှင့်ပိုပြီးသဘာဝအအခင်းအကျင်းအတွက်မေးခွန်းများမေးအပြင်, နည်းပညာအသစ်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုမေးခွန်းပုံစံကိုပြောင်းလဲခွင့်ပြုပါတယ်။ အများစုကစစ်တမ်းမေးခွန်းများကိုသုတေသီများကရေးသားရွေးချယ်မှုတစ်ခုပုံသေသတ်မှတ်ချက်ကနေရှေးခယျြရာတှငျဖြေဆိုသူအတူပိတ်လိုက်ရသည်။ "။ ပြည်သူများ၏နှုတ်၌စကားလုံးများကိုချပြီး" ဒါဟာတဦးတည်းထင်ရှားတဲ့စစ်တမ်းသုတေသနပညာရှင်ကိုခေါ်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်, ဒီမှာတံခါးပိတ်စစ်တမ်းမေးခွန်း:
"ဒီလာမယ့်မေးခွန်းတစ်ခုကိုအလုပ်၏ဘာသာရပ်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်ဤကဒ်ကိုကြည့်နှငျ့သငျအမြားဆုံးအလုပ်တစ်ခုအတွက်ပိုနှစ်သက်မယ်လို့ဒီ list အပေါ်ထားတဲ့အရာငါ့ကိုပြောပြနိုင်မလား?
သို့သော်ဤတစ်ခုတည်းသောဖြစ်နိုင်သမျှအဖြေကိုရှိပါသလဲ သုတေသီများသည်ဤငါးဖို့တုံ့ပြန်မှုကန့်သတ်ခြင်းဖြင့်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုခုပျောက်ဆုံးစေခြင်းငှါ, တံခါးပိတ်မေးခွန်းများကိုဖို့အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖွင့်စစ်တမ်းမေးခွန်းဖြစ်ပါသည်။ ဒီနေရာတွင်တစ်ခုဖွင့်လှစ် form မှာမေးလျှင်တူညီသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖွင့်:
အဲဒီနှစျခုမေးခွန်းများကိုအတော်လေးဆင်တူပေါ်လာပေမယ့်, Howard Schuman နဲ့ Stanley Presser အားဖြင့်စစ်တမ်းတစ်ခုစမ်းသပ်ချက် (1979) ဖွင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖို့တုံ့ပြန်မှုနီးပါး 60% (ငါးသုတေသီဖန်တီးတုံ့ပြန်မှုအတွက်မပါဝင်ပါ: သူတို့ကအရမ်းကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်များကိုထုတ်လုပ်နိုင်သည်ကိုထုတ်ဖော်ပြသ ကိန်းဂဏန်း 3.9) ။
တုံ့ပြန်မှုမေးခွန်းတံခါးပိတ်သို့မဟုတ်ဖွင့်လှစ် form မှာကိုမေးမြန်းနေသည်ရှိမရှိအပေါ်မူတည်နိုင်သည်ဟုဖေါ်ပြခြင်းစစ်တမ်းတစ်ခုစမ်းသပ်မှုကနေရလာဒ်: 3.9 ပုံ။ ကနေအဆင်ပြေအောင် Schuman and Presser (1979) , စားပွဲ 1 ။
ပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ပိတ်ထားမေးခွန်းများကိုအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောသတင်းအချက်အလက်များလိုက်လျောနိုင်ပြီးနှစ်ဦးစလုံးစစ်တမ်းသုတေသန၏အစောပိုင်းကာလများတွင်လူကြိုက်များကြပေမဲ့, အပိတ်မေးခွန်းများကိုလယ်ပြင်လွှမ်းမိုးလာကြပြီ။ တံခါးပိတ်မေးခွန်းများကိုပိုကောင်းတိုင်းတာခြင်းများကိုသက်သေပြခဲ့ကြသောကြောင့်ဤလွှမ်းမိုးမှုကိုမဟုတျပါဘူး, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ဘဲသူတို့သုံးစွဲဖို့အများကြီးပိုလွယ်ကြောင့်; Open-မေးခွန်းများခွဲခြားစိတ်ဖြာ၏လုပ်ငန်းစဉ်အမှား-ကျရောက်နေတဲ့နှင့်စျေးကြီးသည်။ ကတိကျစွာသုတေသီများတန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်နိုင်သည်ကိုရှေ့ဆက်အချိန်မသိခဲ့ပါသောသတင်းအချက်အလက်ကြောင့်ပျောက်ဖွင့်ထားမေးခွန်းများကိုကနေပြောင်းရွှေ့ကံဆိုးဖြစ်ပါတယ်။
ကွန်ပျူတာအုပ်ချုပ်ခွင့်စစ်တမ်းများမှလူ့အုပ်ချုပ်ခွင့်ရကနေအကူးအပြောင်း, သို့သော်, ဒီအဟောင်းပြဿနာများထဲကတစ်ခုနည်းလမ်းသစ်အကြံပြုထားသည်။ အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်ယခုပွင့်လင်းခြင်းနှင့်ပိတ်ထားသောနှစ်ဦးစလုံးမေးခွန်းများကိုရဲ့အကောင်းဆုံး features တွေပေါင်းစပ်ကြောင်းစစ်တမ်းမေးခွန်းများနိုင်မယ်ဆိုရင်? ဒါကကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးအသစ်ကသတင်းအချက်အလက်ပွင့်လင်းသည်နှင့်လွယ်ကူသော-to-ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်ကြောင်းစစ်တမ်းတစ်ခုရှိနိုင်တယ်လို့ဘယ်သို့လျှင်, ပါသလဲ ဒါကကရင် Levy နဲ့ကျွန်မအတိအကျဘာ (2015) ကိုဖန်တီးရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပါပြီ။
အထူးသဖြင့်, ကရင်နှင့်ငါစုဆောင်းကြောင်းကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့ရွေးချယ်အသုံးပြုသူ-generated content တွေကိုစစ်တမ်းများသစ်အမျိုးအစားများဒီဇိုင်းအကြောင်းကြားနိုင်ဖြစ်အံ့သောငှါစဉ်းစားမိတယ်။ ကျနော်တို့အထူးသဖြင့်အသုံးပြုသူ-generated မောင်းနှင်တစ်ခုဖွင့်လှစ်, ပြောင်းလဲနေသောစနစ်၏ဝီကီပီးဒီးယား-တစ်အံ့သြစရာဥပမာအားဖြင့်မှုတ်သွင်းအကြောင်းအရာ-ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်သောစစ်တမ်းတစ်ခုဝီကီစစ်တမ်းဟုခေါ်ကြသည်။ ဝီကီပီးဒီးယားသည်၎င်း၏သင်တန်းသားများကို၏အတွေးအခေါ်များအပေါ်အခြေခံအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတစတစတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသကဲ့သို့, ငါတို့က၎င်း၏သင်တန်းသားများကို၏အတွေးအခေါ်များအပေါ်အခြေခံအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှတစတစတိုးတက်ပြောင်းလဲလာကြောင်းစစ်တမ်းတစ်ခုစိတ်ကူး။ ကရင်နှင့်ငါစစ်တမ်းများကျေနပ်သင့်တယ် Wiki သုံးခုဂုဏ်သတ္တိများဖွံ့ဖြိုး: သူတို့က, လောဘကြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နှင့်သပ္ပါယ်ဖြစ်သင့်သည်။ : ထို့နောက်ကို web developer များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်အတူကျနော်တို့ဝီကီ surveys_ ကို run နိုင်မယ့် website ကိုဖန်တီး www.allourideas.org ။
တစ်ဦးဝီကီစစ်တမ်းအတွက်ဒေတာစုဆောင်းခြင်းဖြစ်စဉ်ကိုကျနော်တို့ PlaNYC 2030 နယူးယောက်ရဲ့ citywide ရေရှည်တည်တံ့မည့်အစီအစဉ်သို့နေထိုင်သူများ '' အတွေးအခေါ်များပေါင်းစပ်နိုင်ရန်အတွက်နယူးယော့ခ်စီးတီးမြို့တော်ဝန်ရုံးကိုပြုနေတဲ့စီမံကိန်းကြောင့်ရုပ်ပြဖြစ်ပါတယ်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရန်, မြို့တော်ဝန်ရုံး၎င်းတို့၏ယခင်အဝေးရောက်အပေါ်အခြေခံပြီး 25 စိတ်ကူးများများစာရင်းကိုထုတ်ပေး (ဥပမာနှင့် "ကျောင်းကသင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်အစိမ်းရောင်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးကလေးတွေသှနျသငျ" "အခြို့သောစွမ်းအင်ထိရောက်မှုအဆင့်မြှင့်တင်အောင်အားလုံးကြီးမားသောအဆောက်အဦတောင်းဆို") ။ မျိုးစပါးအဖြစ်ကဤ 25 အတွေးအခေါ်များကိုသုံးပြီး, အမြို့တော်ဝန်ရုံးမေးခွန်းကိုမေးလျှင် "သင်တစ်ဦးစိမ်းလန်းတဲ့, သာ. ကြီးမြတ်နယူးယောက်စီးတီးအတွက်ပိုကောင်းတဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါသလဲဘယ်?" စစ်တမ်းဖြေကြားသူများတမြို့လုံးအနှံ့ဖွင့်ပါ schoolyards "ဥပမာ (စိတ်ကူးများတရံနှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည် အများပြည်သူကစားကွင်းအဖြစ် "နှင့်" တိုးတက်) မြင့်သောပန်းနာရင်ကျပ်ရောဂါနှုန်းထားများ "နဲ့ရပ်ကွက်မှာရှိတဲ့သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်းကိုပစ်မှတ်ထား, သူတို့အကြား (ပုံ 3.10) ကိုရှေးခယျြဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ ရွေးချယ်ရာတွင်ပြီးနောက်, ဖြေဆိုသူချက်ချင်းစိတ်ကူးများ၏အခြားကျပန်းရွေးချယ်ထားသည့် pair တစုံနှင့်အတူတင်ပြခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဟာ "။ ငါဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး" အရေးကြီးသည်မှာနေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့မဲပေးသို့မဟုတ်ရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်စေစေလိုကြောင်းအဖြစ်အဘို့မိမိတို့ဦးစားပေးအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပံ့ပိုးဆက်လက်နိုငျခဲ့ကွ, မည်သည့်အချက်မှာ, ဖြေဆိုသူမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အတွေးအခေါ်များကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ခဲ့ကြတယ်ကပေးသော-ဆိုင်းငံ့ခွင့်ပြုချက် ယင်းမြို့တော်ဝန်ရဲ့အခြားသူများအားပေးအပ်ခံရဖို့စိတ်ကူးများ၏ရေကူးကန်၏အစိတ်အပိုင်းရုံး-ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်သင်တန်းသားများကိုလက်ခံရရှိကြောင်းမေးခွန်းများကိုပွင့်လင်းနှစ်ဦးစလုံးတို့တစ်ပြိုင်နက်ပိတ်လိုက်တယ်။
3,10 ပုံ: တစ်ဝီကီစစ်တမ်းအဘို့အ Interface ။ Panel ကို (က) တုံ့ပြန်မှု screen နဲ့ panel ကို (ခ) ကိုရလဒ်မျက်နှာပြင်ပြသထားတယ်ပြသထားတယ်။ ကနေခွင့်ပြုချက်အားဖြင့်ပြန်ထုတ်လုပ်ခြင်း Salganik and Levy (2015) , ပုံ2။
အဆိုပါမြို့တော်ဝန်ရုံးနေထိုင်သူတုံ့ပြန်ချက်ရရှိရန်အသိုင်းအဝိုင်းအစည်းအဝေးများတစ်စီးရီးနှင့် တွဲဖက်. အောက်တိုဘာလ 2010 ခုနှစ်တွင်ယင်း၏ဝီကီစစ်တမ်းစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ လေးလကျော်, ထားသော 1,436 ဖြေဆိုသူ 31.893 တုံ့ပြန်မှုများနှင့် 464 အသစ်များကိုစိတ်ကူးများလှူဒါန်းခဲ့သည်။ ပြင်းထန်စွာ, ထိပ်ကို 10 အမှတ်ပေးစိတ်ကူးများ 8 မဟုတ်ဘဲယင်းမြို့တော်ဝန်ရုံးကနေအမြိုးအနှယျစိတ်ကူးများများ၏အစု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းထက်ပါဝင်သူများဖြင့်တင်ထားသောခဲ့ကြသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက္ကူအတွက်ကိုဖော်ပြရန်အဖြစ်နှင့်, အပ်လုဒ်တင်ထားသောစိတ်ကူးများအမြိုးအနှယျအတွေးအခေါ်များထက်ပိုကောင်းတဲ့သွင်းယူနှင့်အတူဤတူညီသောပုံစံ, များစွာသောဝီကီစစ်တမ်းများအတွက်တွေ့ကြုံတတ်၏။ တနည်းအားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်သစ်များဖွင့်လှစ်ခြင်းအားဖြင့်, သုတေသီများပိုပြီးတံခါးပိတ်ချဉ်းကပ် အသုံးပြု. လွဲချော်ခဲ့ကြလိမ့်မယ်လို့အမှုအရာကိုသင်ယူနိုင်ကြသည်။
ဤအသတ်သတ်မှတ်မှတ်စစ်တမ်းများ၏ရလဒ်များကိုကျော်လွန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဝီကီစစ်တမ်းစီမံကိန်းကိုလည်းဒစ်ဂျစ်တယ်သုတေသန၏ကုန်ကျစရိတ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာသုတေသီများသည်ယခုအတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေထဲမှာကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်မဆိုလိုတယ်ဘယ်လိုဖော်ပြသည်။ ပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသီများသည်ယခုလူများစွာကအသုံးပြုနိုင်အစစ်အမှန်စနစ်များကိုတည်ဆောက်နိုင်ကြသည်: ငါတို့သည်ထက်ပို 10000 ဝီကီစစ်တမ်းများတည်ခင်းဧည်ခဲ့ကြပြီးထက်ပို 15 သန်းတုံ့ပြန်မှုစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ စကေးမှာအသုံးပွုနိုငျကွောငျးအရာတစျခုခုကိုဖန်တီးရန်ဤသည်စွမ်းရည်ဝက်ဘ်ဆိုက် built ခဲ့ပြီးတစ်ချိန်ကကြောင့်ကျနော်တို့ကလူ့ခဲ့လျှင် (သင်တန်း၏, ဤစကားမှန်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်အခြေခံအားဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူတိုင်းကလွတ်လပ်စွာရရှိနိုင်စေရန်ဘာမျှမကုန်ကျဆိုတဲ့အချက်ကိုထံမှလာ ) အင်တာဗျူး -administered ။ ထို့ပြင်ဒီစကေးသုတေသနအမျိုးမျိုးနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ဤ 15 သန်းတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်ပါဝင်သူကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးအနာဂတ်အတိုင်းအတာများသုတေသနအတွက်တန်ဖိုးရှိသောစမ်းသပ်-အိပ်ရာသည်။ ငါဒစ်ဂျစ်တယ်-အသက်အရွယ်ကုန်ကျစရိတ်အဆောက်အဦများ-အထူးသဖြင့်သုညများက variable ကိုကုန်ကျစရိတ်ဒေတာ-သောအခါငါအခနျးကွီး4အတွက်စမ်းသပ်ချက်ဆွေးနွေးရန်ဖန်တီးနေကြသည်အခြားသုတေသနအခွင့်အလမ်းများအကြောင်းကိုပိုမိုဖော်ပြရန်ပါလိမ့်မယ်။